डा रमेश सिंह भण्डारीको नयाँ गीत 'धन्यवाद' सार्वजनिक त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ सर्जन डा रमेश सिंह भण्डारीले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन्। डा भण्डारीको आफ्नै शब्द रहेको धन्यवाद बोलको गीत शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो। शनिबार, वैशाख १७, २०७९
डाक्टरको कलायात्रा : बंगलादेश पढ्न जाँदा पनि चित्र बनाउनमै मस्त डा. सविना पेशाले नेत्र विशेषज्ञ र प्राध्यापक पनि हुन्। उनी डाक्टर, साहित्यकार हुँदै अब चित्रकार पहिचानमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएकी छिन्। एक कुशल डाक्टरले चित्रकारितामा पनि यतिका कलाकर्म सार्वजनिक गर्नु प्रसंशनीय कार्य हो। शनिबार, कात्तिक १३, २०७८
नेपालको पहाडमा ध्यान गरेको तस्बिर राख्दै परिणितिले भनिन्- दैनिक मेडिटेसन मेरो सेक्रेट मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन दैनिक मेडिटेसन नै आफ्नो राज रहेको उनले नेपालको पहाडमा मेडिटेसन गर्दै गरेको तस्बिर राखेर सार्वजनिक गरेकी हुन्। ‘डेली मेडिटेसन इज माइ सेक्रेट।’ शनिबार, कात्तिक ६, २०७८
ह्याप्पिनेस इज हेल्दी! प्रशन्न चित्त हुनेहरु आफ्नो काम जोश र जाँगरले चाख लिएर गर्छन्, गरेको काम राम्रो हुन्छ। ध्यान दिएर गर्ने हुँदा गल्ती कम हुन्छ, र तोकिएको समयमै आफ्नो काम सम्पन्न गर्दछन्। आइतबार, भदौ २०, २०७८
चारदेखि ६ महिनाबीचका गर्भवतीका लागि उपयोगी व्यायाम, अभिनेत्री प्रियंका कार्कीका पाँच टिप्स व्यायाम चारदेखि ६ महिनाबीचका गर्भवतीका लागि मात्रै उपयोगी हुनेछ। यी व्यायामले गर्भवतीलाई बच्चा जन्माउने समयमा मद्दत मिल्नेछ। मंगलबार, साउन १२, २०७८
यसरी बनाउनुहोस् स्वास्थ्यवर्द्धक रैथाने खाना कथुरे र लोकल कुखुराको झोल नेपालको मैलिक र रैथाने खाना कथुरे तथा लोकल कुखुराको झोल प्रायः सबै भेगमा लोकप्रिय छ। पहाडी भेगमा परापूर्वकालदेखि खाइने कथुरे र लोकल कुखुराको भालेको झोल अहिले राजमार्गका होटल र रिसोर्टमा निकै महङ्गो मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। शनिबार, असार २६, २०७८
पहिलो बिरामी जाँच्दा... रुसबाट ल्याएको कालो सुट लगाएँ। रातो टाइ, सेतो शर्ट लगाएर ब्रिफकेस बोकेर टिपटप भएर गएँ। मलाई निकै गाह्रो भइरहेको थियो। शनिबार, असार १९, २०७८
किन बिग्रन्छ बालबालिकाको दाँत, कसरी जोगाउने? दन्त चिकित्सक थापा बालबालिकाको दाँत बिग्रिनुको मुख्य कारण जंक फुड र गुलिया खानेकुरा भएको बताउँछिन्। ‘हिजोआज जंक फुड र गुलिया खानेकुरा बालबालिकालाई अधिक मात्रामा खुवाइन्छ, दाँत बिग्रनुको मुख्य कारण यही हो,’ उनले भनिन्। बिहीबार, असार १०, २०७८
कोभिड उपचारमा सक्रिय स्वास्थ्यकर्मीको वास्तविकता चित्रण गर्ने डा झाको गीत ‘नसोध मलाई...’ ‘नसोध मलाई‘’ शीर्षकको उक्त गीतमा संक्रमितहरुको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरुको मनोदशा मात्र चित्रण गरिएको छैन। बिहीबार, जेठ १३, २०७८
अभिनेत्री साेनाक्षी सिन्हाकाे फिटनेस सोनाक्षीले घरमा व्यायाम गरिरहेको फोटो सामाजिक सञ्जाल इन्टाग्राममा पोस्ट गरेकी हुन् । फोटोको क्याप्सनमा उनले लेखेकी छन्, 'जब डब्ल्युएफएचको मतलव वोर्कआउट फ्रम होम हुन्छ । शनिबार, वैशाख ११, २०७८
स्वस्थ रहन असल खानपानका २० उपाय नयाँ कार्यको शुभारम्भका लागि मात्र होइन आफूलाई स्वस्थ राख्न पनि विशेष योजना र स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउन आवश्यक छ। बुधबार, वैशाख १, २०७८
यस्तो छ अभिनेत्री बिपासा बासुले गर्दै आएको बोसो घटाउने ३० मिनेटको एक्सरसाइज (भिडियो) बलिउड अभिनेत्री बिपासा बासु फिटनेस आइकन हुन्। उनको बोल्ड एन्ड ब्युटीफुल शरीरको समग्र भारतमा मात्र होइन विश्व बजारमा पनि चर्चा हुन्छ। शनिबार, चैत २१, २०७७
अमेरिकामा रहेका नेपाली डाक्टर जोशीको देशभक्ति गीत ‘देशको आउँछ याद’ अमेरिकाको मार्सफिल्ड विसकोन्सिनमा बसाेबार गर्ने डा जोशीलाई गीत लेखनमा किशोरावस्थादेखि नै रुची थियो। उनले थुप्रै गीतहरु लेखिसकेका छन्। शनिबार, चैत २१, २०७७
फिट रहन जिम तथा योगा गर्छिन आलिया भट्ट बलिउडमा आउनु अघि उनी निकै मोटी थिइन। उनको पहिलो फिल्म ‘स्टुडेंट अफ द ईयर’ का लागि १६ किलो तौल घटाएकी थिइन। बुधबार, चैत ११, २०७७
फिटनेसका लागि के गर्छिन शिल्पा शेट्टी? बजारबाट कुनै पनि खानेकुरा खरिद गर्दा त्यहाँ दिइएका सामग्रीहरुको लेबल पढेर मात्र खरिद गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। उनी भन्छिन्, ‘खानेकुराबाट भाग्ने होइन। सही मात्रा मिलाएर सही खाना खानुपर्छ।’ शनिबार, फागुन २९, २०७७
कलेजो चिर्ने डाक्टरको संगीत थेरापी हालै सार्वजनिक भएको निलो आकाश बोलको गीत भने डाक्टर भण्डारी आफैले लेखेका हुन्। गीत रचना गर्दाको क्षण सम्झँदै उनले भने, 'केही शब्द जम्मा पारेर श्रीमतीलाई सुनाएँ, उनले राम्रो लाग्यो भनेपछि अरु शब्द जम्मा पारेर गीतको आकार दिएको हुँ।' शनिबार, फागुन ८, २०७७
डा रिजालको प्रेमिल जोडी : एकअर्काप्रति कुनै गुनासो छैन दुवैजना जीवनभरका लागि एक हुँदै थिए, तर विवाह मण्डपमा उनीहरुको एकपटक पनि बोलचाल भएन। सरलाले त आफैंसँग विवाह गरेको व्यक्तिलाई आँखा उठाएर हेर्दै हेरिनन्। आइतबार, फागुन २, २०७७
उपचार र संगीत सँगसँगै डा रिमाल र उनका सहकर्मी चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुका लागि उनको कोठा अभ्यास गर्ने ठाउँ जस्तै बनेको छ। डा रिमालसँगै उनका सहकर्मीहरु पनि फुर्सदमा उनकै कोठामा अभ्यास गर्न आइपुग्छन्। प्रतिष्ठानकै मनोरोग विभागमा कार्यरत डा शशांकराज पोखरेल गाउँछन् र गितार बजाउँछन्। बुधबार, माघ २८, २०७७
तौल घटाउन डोरी खेल्छिन सोनाक्षी सिन्हा, यस्ता छन् डाेरी खेल्दा हुने फाइदा अन्य नायिकाको तुलनामा उनी मोटी छिन्। उनी अहिले तौल घटाउन डोरी खेल्छिन। जसका कारण पहिलेभन्दा उनी स्लिम पनि बनेकी छिन्। केही दिनअघि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनी डोरी खेलिरहेकी देखिन्छिन्। शनिबार, माघ ३, २०७७
यस्तो छ फिटनेसका लागि प्रियंकाको डाइट प्लान प्रियंकाको चार्म र फिटनेसको चर्चा बलिउडदेखि हलिउडसम्म चल्ने गर्छ। हालै एक अन्तर्वार्तामा प्रिंयकाले आफू फिट रहनको लागि कस्तो डाइट योजना बनाउँछु भन्नेबारे बताइन्। शनिबार, मंसिर २१, २०७६
सधैँ जवान : यस्तो छ यी कलाकारको फिटनेस राज खासमा यो दाबी उनको मात्रै होइन, आम दर्शकको दृष्टिकोण पनि हो। शारीरिक रुपमा देखिएको तन्दुरुस्ती र कामप्रति जोश र जाँगरले पनि उनलाई त्यस्तै संकेत गर्छ अर्थात् ‘जवान’। शनिबार, कात्तिक ३०, २०७६
आँखाका डाक्टर सुमनले पलेँटीमा गुञ्जाए आँखाकै भाका कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका कतिपय गीतहरू आँखा र दृष्टिसँग सम्बन्धित थिए। आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित संस्मरण सुनाउँदै गाइरहेका सुमनलाई सुन्दा लाग्थ्यो उनी आँखा र भाकाका संगम हुन्। आइतबार, कात्तिक १०, २०७६
अक्टोबर पलेँटीमा गाउँदै आँखा विशेषज्ञ डा सुमन थापा शनिबार, कात्तिक २, २०७६